HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Toba) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kamba Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Vietnamianina Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Inona no antony namoronana antsika?
Nahoana ny olona no mijaly sy maty?
Mba mijery ahy ve Andriamanitra?
Efa nisy nanitikitika ny sainao ve ireo? Olona maro koa maneran-tany no mametraka fanontaniana toy ireo. Misy ve anefa ny valiny?
Eny, ary an-tapitrisany no nahita valiny mahafa-po tao amin’ny Baiboly. Te hahalala an’izay lazain’ny Baiboly ve ianao? Vonona hampianatra anao maimaim-poana ny Vavolombelon’i Jehovah. *
Vao mahare hoe hianatra Baiboly ny olona sasany, dia miteny hoe: “Tsy manam-potoana aho!” na hoe: “Sao dia sarotra be ilay izy?” na: “Sao dia tafiditra lalina amin’izany eo aho?” Misy kosa mazoto. Jereo ange ny tenin’ireto olona ireto e!
“Efa nivavaka tany amin’ny Katolika, Protestanta, Sikh, ary Bodista aho, dia efa nianatra teolojia tany amin’ny oniversite koa. Mbola be dia be ihany anefa ny fanontaniako momba an’Andriamanitra. Nisy Vavolombelon’i Jehovah tonga tao amiko, avy eo. Gaga aho fa voavaliny tao amin’ny Baiboly daholo ny fanontaniako, ka nanaiky hianatra Baiboly aho.”—Gill, Angletera.
“Nanontany zavatra be dia be tamin’ny pasiteranay aho, fa tsy nahazo valiny mahafa-po. Vavolombelon’i Jehovah no nahavaly ny fanontaniako sady tsy nampiasa afa-tsy Baiboly izy. Tonga aho dia nanaiky hianatra Baiboly.”—Koffi, Bénin.
“Tena te hahalala aho hoe manao ahoana ny olona rehefa maty. Nino aho hoe mahavita mampijaly ny velona izy ireny. Tiako ho fantatra ihany anefa izay lazain’ny Baiboly, ka nianatra tamin’izay namako Vavolombelon’i Jehovah izay aho.”—José, Brezila.
“Namaky Baiboly aho nefa tsy nisy azoko. Soa ihany fa nisy Vavolombelon’i Jehovah nitsidika ahy, dia nisy faminaniana maromaro tao amin’ny Baiboly nohazavainy tsara. Vao mainka aho te hahalala an’izay lazain’ny Baiboly.”—Dennize, Meksika.
“Lasa saina aho hoe tena mba mijery ahy ve Andriamanitra. Nivavaka tamin’ilay Andriamanitra resahin’ny Baiboly àry aho. Ny ampitson’iny ihany, dia nisy Vavolombelon’i Jehovah tonga tao amiko, ary nanaiky hianatra Baiboly aho.”—Anju, Népal.
Hita avy amin’ireo fa marina ilay tenin’i Jesosy hoe: “Sambatra ny mahatsapa fa mila an’Andriamanitra.” (Matio 5:3) Mila azy tokoa isika olombelona, ary efa voajanahary amintsika izany. Andriamanitra irery no afaka manampy antsika amin’izany, ary atorony ao amin’ny Baiboly izay tokony hataontsika.
Hoatran’ny ahoana àry izany mianatra Baiboly izany? Inona no soa ho azonao amin’ilay izy? Hovaliana ao amin’ny lahatsoratra manaraka ireo.
INONA NO DIKANY? Avy amin’ny teny grika hoe biblia, midika hoe “boky kely maro”
MISY BOKY FIRY AO? Misy boky 39 nosoratana tamin’ny teny hebreo (nisy ampahany kely tamin’ny teny aramianina), ary 27 tamin’ny teny grika
OVIANA NO NOSORATANA? Tamin’ny 1513 T.K. ka hatramin’ny 98 A.K. tany ho any *, izany hoe nandritra ny 1 600 taona teo ho eo. Olona 40 teo ho eo no nanoratra azy
MISY AMIN’NY FITENY FIRY? Efa voadika amin’ny fiteny 2 500 mahery izy manontolo na ny ampahany aminy
FIRY NO VITA PIRINTY? Dimy arivo tapitrisa eo ho eo. Ny Baiboly no boky miely indrindra eran-tany
^ feh. 23 Ny hoe “T.K.” dia midika hoe “Talohan’i Kristy”, ary ny “A.K.” hoe “Aorian’i Kristy.”
Hizara Hizara Nahoana no Ilaina ny Mianatra Baiboly?